Fil d'actualités du 15/10/2018
15/10/2018 - 23:00 : FIFANINTSANAN'NY CAN 2019: Amin'izao amin'ny 11 ora alina izao vao tafavoaka tao Ivato ny delegasiona Équato-guinéen noho ny fisavana. Mbola maniry ny hijery ny kianjan'i Vontovorona izy ireo amin'izao alina izao. Mbola miandrandra fandresena, raha ny resaka nataony.
15/10/2018 - 22:00 : BAREA: Tonga an-tanindrazana izao alina izao ny Barean'i Madagasikara, niray fiaramanidina tamin'ny delegasionina Équato-guinéen.
15/10/2018 - 15:30 : TETR'ANDRO: Miraraka ny rotsak'orana arahina avandra amin'izao fotoana izao amin'ny faritra sasany eto Antananarivo, ka isan'ny efa rakotra izay havandra ny Ankaraobato sy eny amin'iny faritra Antananarivo Atsimondrano iny.
15/10/2018 - 15:00 : BAREAN'I MADAGASIKARA: Tamin'ny 2 ora mahery minitra vitsivitsy teo vao niainga avy any Malabo ny Barean'i Madagasikara iray fiaramanidina amin'ny ekipam-pirenen'i Guinée Equatoriale.
15/10/2018 - 13:30 : MARC RAVALOMANANA -AMBOVOMBE: "Faly tena faly aho mihaona aminareo eto Ambovombe. Tsapako fa mangetaheta fampandrosoana ianareo. Ny antony nahatonga ahy hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena dia tsapako ny fijaliana mahazo ny vahoaka Malagasy. Tonga aho hamerina indray ny fandriam-pahalemana, hamerina ny rafitra fitsaboana, hamerina ny tetik'asa fampianarana, hanome rano fisotro madio".
15/10/2018 - 13:00 : BASY TSY ARA-DALANA: Basy 843 no hopotehina ampahibemaso eo anoloan'ny Lapan'ny tanana Analakely rahampitso 16 oktobra.
15/10/2018 - 12:30 : MARC RAVALOMANANA : Any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy izy no manao fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Efa miomana fatratra handray azy ohatra ny vahoakan'i Tolagnaro.
15/10/2018 - 12:00 : FIANGONANA KATOLIKA : Miantso ny tanora hahay hifidy ka hahay hihaino ny feon'ny fieritreretana ny eglizy katolika, ary tsy hanome toromarika ny mpino hanohana kandida izatsy na izaroa.
15/10/2018 - 11:30 : JMJ 2021: Any Antsirabe no hatao ny JMJ MADA 10 amin'ny taona 2021 taorian'ny tany Mahajanga farany teo.
15/10/2018 - 11:00 : TVM - VAOVAO MAHAFINARITRA: Hivantana amin'ny fahita-lavitra TVM ny lalao miverina hiaonan'ny Barea an'i Madagasikara sy Guinée Equatoriale rahampitso amin'ny 2ora sy sasany eny Vontovorona.